FILOHA VAOVAON’NY CAF : Tsy dia nahafaly ny Filoha Rajaonarimampianina ny fahalanian’i Ahmad
Ohatran’ny tsy nahafaly an’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny nahavoafidy an’ny Loholona teo aloha Ahmad, ho filohan’ny Caf na dia nankasitraka azy ity farany tamin’ny fahatongavany. 22 mars 2017
« Reharehan’ny Firenena malagasy no nahavoafidy an’i Ahmad ho filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina misahana ny baolina kitra (CAF) ary tokony ho noraisina tamin’ny fomba manetriketrika teto Antanana- rivo. Na ny Praiministra aza tsy tonga nitsena azy teny Ivato », hoy ny fanazavana nataon’ny mpiasam-panjakana iray, omaly. Nasehon’ny vahoakan’i Mahajanga kosa fa « fanôrolahin’izy ireo » i Ahmad ary nangotroka ny fitsenana azy tamin’ny farany herinandro teo tany an-toerana.
« Mihoatra lavitra ny isan’olona tonga nitsena ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny olona nanome voninahitra ny fahatongavan’i Ahmad tany Mahajanga. Tokony hieritreritra ihany ny Fitondrana. Tsy mahay mankasikatra i Hery Rajaonarimampianina », hoy izy.
« Dia gaga ingahy Filoha indray andro any raha misy mitsoaka an-daharana ny mpikambana Hvm ? », hoy hatrany ny fanehoan-kevitra.
Na izany na tsy izany, nilaza i Ahmad tamin’ny fandalovany tany Mahajanga fa tsy hanao pôlitika pôlitisianina intsony ny tenany ary ho ambasadoran’ny vahoakan’i Mahajanga manomboka izao. Mazava, angamba, ny resaka……